PP Plunk Hetsika PP, Rolling Hollow Plastika, boaty plastika vita amin'ny plastika - Mandeha
Tongasoa eto aminay
OEM serivisy OEM natolotra serivisy atolotra
Shandong Runping Plastic Co., Ltd dia orinasa iray milina avo lenta ho an'ny fonosana goavam-baravarankely PP (roll) ary boaty feno fonosana Plastika misy ISO 9001: 2008 & fanamafisana RoHs ao an-tanànan'i Weifang, faritany shandong, Shina.
Ny fanodinana feo sy ny hafanana hafanana
Noho ny firafitra marefo amin'ny takelaka vita amin'ny plastika, dia mihena kely ny hafany sy ny fifindran'ny feo noho ny an'ny matevina. Manana insulation hafanana tsara sy fiantraikany fanamafisana izany.
Ny voalohany dia ny vidin'ny fitaovana plastika tsy misy fotony ambany noho ny fitaovana hafa. Izy io dia hamonjy be dia be ny vidiny mandritra ny dingana ny fividianana fitaovana vita amin'ny vokatra vita.
Zava-dehibe ny mahafantatra fa ny fitaovam-pifandraisana amin'ny tontolo iainana dia mahaliana kokoa manerana izao tontolo izao. Ny takelaka goavambe PP dia tsy misy poizina ary tsy mandoto, ary azo averina sy averina asiana vokatra vita amin'ny plastika hafa.
Manantena izahay fa hanana fampandrosoana ara-barotra tsara amin'ny mpanjifa rehetra! Tongasoa mitsidika ny orinasa izahay!
fa iza isika
Shandong Runping Plastika Co, Ltd dia orinasa iray milina avo lenta ho an'ny fonosana goavam-baravarankely PP (roll) ary boaty feno fonosana Plastika misy ISO 9001: 2008 & fanamarinana RoHs ao amin'ny tanàna Weifang, faritany shandong, Shina. Ny orinasa anay dia manana andalana famokarana plastika plastika 11 mandroso sy atrikasa 3, famolavolana isan-taona ho an'ny birao plastika plastika avo lenta dia mahatratra 10000Ton. Nahazo ny fanamarinana ISO 9001: 2008 sy ny RoHs aho. Manome serivisy tolotra famarotana 24 ora izahay. Afaka miantso anay amin'ny fotoana rehetra ianao (86–13355279991) na mandefa mail izahay; inona ny app 0086 13355279991 mpanjifa! Tongasoa eto hitsidika ny orinasa izahay!